Fitaterana olona an-tsokosoko :: Mpamilina ambilansy eny Befelatanana nogadraina • AoRaha
Maromaro ny vesatra nanenjehana sy nampidirana am-ponja vonjimaika an’ilay mpamily ny fiara fitondrana marary an’ny hopitaly Befelatanana. Tra-tehaka nitondra mpandeha tao anaty fiara fitondrana marary avy any Antsirabe nikasa hihazo ny renivohitra io mpamily io, tamin’ny 25 mey lasa teo.
Nandefasan’ny Fampanoavana azy eny am-ponja, tamin’ny zoma lasa teo, ny vesatra noho ny fanararaotam-pahefana, fanitsakitsahana ny fepetra hamehana ara-pahasalamana, fampiasana ny fahefana hahazoana tombontsoa manokana.
Nihodinkodina tao Antsirabe io fiara fitondrana marary io nitady mpandeha, tamin’ny alin’ny 25 mey. Sendra ireo zandary miambina misafo ny tanànan’Antsirabe ilay fiara tany Ampiaviana, tokony ho tamin’ny 9 ora sy sasany alina, araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana.
« Gaga ireo zandary maheno ny mpamily manontany olona sao andeha hiakatra any an-drenivohitra. Nosavaina avy hatrany ny fiara ka nahitana olona enina tao anatiny. Tsy nisy nanana taratasy famantarana amin’ny maha mpitsabo na mpitsabo mpanampy na iray aza ireo mpandeha. Vao mainka nampitombo ny ahiahy izany. Nentina teny amin’ny tobin’ny zandarimaria ilay fiara niaraka tamin’ireo mpandeha, taorian’izay », araka ny fitantaran’ireo zandary any Antsirabe.
« Taorian’ny fakàna ambavany ireo mpandeha sy ny mpamily no nahafantarana fa misy manofa enina hetsy ariary io fiara fitondrana marary io. Milaza ho mandrotsaka dimy alina sy iray hetsy ariary ao amin’ny kitapom-bolam-panjakana itsy mpamily itsy, aorian’ izay », hoy kosa ny loharanombaovao akaiky ireo mpanao famotorana.
Natolotra ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly na ny PAC, teny amin’ny 67Ha ingahy mpamily rehefa vita ny fanadihadiana rehetra natao taminy. Nanapa-kevitra ny hitazonana azy am-ponja vonjimaika eny Antanimora ny Fampanoavan’ny PAC, tamin’ny zoma hariva 29 mey lasa teo.
Fanarenana vakoka :: Nasongadin’ny Filoha ny haha-soa iombonana ny asa eny Anatirova
Basikety – Sekoly ambony :: Hahemotra amin’ny herintaona ny « Smatch’In » manaraka